Teknika toy ny Quilling Paper hanehoana mozika | Famoronana an-tserasera
Iray izany mozika izany ny fanehoana kanto avo indrindra Zavatra tsy hahagaga antsika mihitsy izany, satria afaka miteny isika fa ny feo no manome loko ny fanahintsika ary mitondra antsika alohan'ny fahasambarana eo amin'izao tontolo izao, toy ireo toe-pientanam-po mampiakatra ny onjan'ny fiainantsika ary milatsaka tsy misy Indraindray isika dia tsy afaka manao na inona na inona momba izany.
Amin'ity asa izay ananantsika talohan'ny niantsoantsika ity "Ny mozika dia feon'ny fanahy" ary izay vita amin'ny Quilling Paper na taratasy filigree, dia mitondra antsika amin'ny teknika manokana izay manome tsiro tena tsara ao amin'ity sombin-kazo ity izay misy lokolay solo-tena amin'ny loko samihafa.
mandritra ny herinandro endrika boribory izay mandray ny habaka rehetra ny lokanga, miaraka amin'ireo tonony sy loko izay avy amin'ny volomboasary ka hatramin'ny manga ao anaty fivoarana am-peo izay manome valiny tena tsara, mamela antsika ho talanjona amin'ilay taratasy filigree izay manolotra fahagagana hafa.
Raha mijery akaiky kokoa an'ity sombin-javatra ity isika dia mahatsapa manao ahoana marina ny tsipika Ary midika izany fa manana teknika manokana ny mpamorona, izay vitany taorian'ny fampiharana nandritra ny taona maro satria tsy mora mihintsy.
Asa izay mety ho tonga lafatra ny fonon'ny rakikira mozika, ilay iray maneho amin'ny fomba tsy hita maso mba hanehoana izay mety ho tsapantsika amin'ireo zavamaneno ireo izay mihira ny feon-kira avo indrindra.
Asa tena mahaliana ny manohy mitady asa bebe kokoa toa ity vita amin'ny Quilling Paper, ary izay misy horonan-taratasy miforitra mba hamoronana endrika haingon-trano. Ary miresaka momba ny teknika iray izay nanomboka tamin'ny andro taloha tany Egypte izahay, izay nampiasain'ny papyrus ho fotony, ka io taty aoriana dia nampiasain'ireo moanina conventuale hanatsarana sy handravahana sary masina.
Raha te hahagaga anao ny ny fahaizana zavakanto atolotry ny taratasy, Avia aty Eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » 'Feon'ny fanahy ny mozika', namboarina tamin'ny Quilling Paper na Filigree Paper
Fernando Mejia dia hoy izy:
Ity pejy ity dia iray amin'ireo mahaliana indrindra sy fanabeazana tonga amin'ny mailako. MISAOTRA
Valiny tamin'i Fernando Mejía
Tongasoa ianao Fernando! Misaotra tamin'ny teninao fa ankasitrahana indrindra izy ireo: =)